Miha mivadika horera
Manao ahoana ianao ry Jean ! Izahay mbola salama ihany aloha hatreto ee ! Manahy mafy aho ry Jean fa hiha ratsy dia ratsy ity tantara ity kno!! Lasa saina be aho fa miha mivadika horera andro aman’alina ity ianareo.
Taratasin’i Jean Revy an-jambany
Eny ary ry Jean ! Izay manan-tsofina enti-mihaino, hono… hainareo izany ny tohiny e e ! Ianareo mantsy nilaza ho tena mpankato io teny io tokoa hatrany am-piandohana.
Oadray re marina
Oadray 're ry solombavambahoaka malagasy Nanjakan'ny kolikoly, nandray vola taratasy Dia tena namidinareo ve ny hoavin'ilay firenena ? Tezitra aminareo ny vahoaka, depiote tia tena.